कोरोनासित डर लाग्न छाड्यो: उषा खड्गी - अन्तर्वार्ता - नारी
मीस नेपाल २००० तथा फेसन डिजाइनर हुन्, उषा खड्गी । उनले लकडाउनको समय बिरगञ्जमा बसेर बिताइरहेकी छिन् । उनै खड्गीसित नारीकर्मी सिर्जना दुवाल श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
लकडाउन सकिने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ ?
बिरगञ्जबाट काठमाडौं जान्छु । अनि बुटिक हेर्न जान्छु ।
दिनभर घर भित्रै रहादाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ?
सुरुको दुई साता आनन्दै भयो । सुतेरै समय बिताएा । त्यसपछि दिनहरु काट्न मुस्किल भइरहेको छ । काम, पैसाको चिन्ताले सताउन थाल्यो । क्रमश: आफ्नो मात्रै तनाव होइन भनेर चित्त बुझाइ रहेको छु ।
कुनै सिर्जनात्मक गतिविधि गर्नुभएको छैन ?
एक महिनादेखि इन्स्टाग्राम मार्फत् हरेक दिन लाइभ कार्यक्रम चलाइरहेको छु । एक घण्टाको सो कार्यक्रममा सेलिब्रेटी, मनोचिकित्सकलगायत व्यक्तिसंग अन्तरवार्ता गरिरहेको छु । १४ वर्षदेखि अन्तरवार्ताको कार्यक्रम चलाएको थिएन ।
यसलाई निरन्तरता दिने सोच बनाउनु भएको छ कि ?
कुनै टेलिभिजन च्यानलवा युट्युबमा भएपनि ‘उषाज शो’ नामक अन्तरवार्ताको कार्यक्रम चलाउने प्लान बनाएको छु । लकडाउन पछि स्टुडियो सेटअप गरेर लाइभ शो गर्ने सोच छ ।
कोरोनासाग कतिको डराउनु भयो ?
सुरुमा त एकदमै डराएा । नेपालमा एक जनालाई लाग्यो भन्नासाथ डर लाग्यो । २,३ जना हुादै गए पछि झनै डराएा । खाना खाएपनि नपचेको जस्तो, बच्चाहरुलाई हेऱ्यो कि रुन मन लाग्ने, खोकीमात्र लाग्दा पनि मर्छु कि भन्ने डर लाग्थ्यो । त्यसमा पनि बिरगञ्जमा लाग्यो भने पछि झनै डराएा । तर पछिल्लो पटक निको भएकाहरु देखेर सकरात्मक हुन थालें । डराउनु भन्दा लड्नु पर्छ भन्ने सोच आयो । त्यस पछि नेगेटिभ न्यूजहरु हेर्दै हेरिना । अहिले खासै डरै छैन ।
डराएर होइन लडेर भन्नु भयो, कोरोनासंग कसरी लड्ने त ?
अब तपाईंको बिजनेशलाई पनि असर गर्ला नि !
पहिला जस्तो राम्रो हुन त समय लाग्ला । तर बुटिकको व्यापार भएकाले बिहे, ब्रतबन्धको सिजनमा राम्रै हुने अपेक्षा छ । पहिला भन्दा सस्तो दरमा काम गर्नुपर्ला । अनलाइन सपिङ बढी चल्ला, त्यहीं अनुसार तयारी गर्ने सोचेको छु ।
लकडाउनले केही सिकायो पनि कि ?
परिस्थिति अनुसार बााच्न सक्नुपर्ने चेतना भयो ।